သင်္ကြန်မှာ မဆိုဖြစ်လိုက်ရတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ဝမ်း နည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ အောင်ထက် – MC Tv Club
သင်္ကြန်မှာ မဆိုဖြစ်လိုက်ရတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ဝမ်း နည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ အောင်ထက်
ပရိသတ်ကြီးရေ အိမ်မက်ဆုံရာသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှတစ် ဆင့်နာမည်ကြီး လူကြိုက်များလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အောင်ထက် ဟာ လက်ရှိမှာလဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေဆဲပါပဲနော်။ အောင်ထက် သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေဟာလည်း ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကြားမှာ အ တော်လေးရေပန်းစားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေ အနေတွေကြောင့် သီချင်းသီဆိုမူ့တွေ ရပ်နားထားတဲ့ အောင်ထက် ဟာ အခုချိန်မှာလဲ ဂီတအနုပညာအလုပ်တွေကို အနည်းအကျဉ်းပဲ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အဆိုတော် အောင်ထက်ဟာပရိသတ်တွေကိုရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါမှာ အဆိုတော် အောင်ထက် ဟာ သူတန်ဖိုးထားရတဲ့ မန်းတောင်ရိပ်ခိုဆိုတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းကြီးကို မဆိုဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလိုက်တာပါ။ ဒါအပြင် ပရိသတ်တွေကိုလဲ မေးခွန်းထုတ်ထားပါသေးတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်ထက် ရဲ့လူမူ့စာ မျက်နှာပေါ်မှာ ” သြော် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးပြီးသွားပြီ ကျွန်တော်တို့ အလွန်တန်ဖိုးထားသော မန်းတောင်ရိပ်ခို သီချင်းကိုတောင် မဆိုဖြစ်လိုက်ဘူး
မိတ်ဆွေတို့ရော??? အားလုံးသောမိသားစုများမိတ်ဆွေများနှစ်သစ်မှာဘေးကပ်ဆိုးမှန်သမျှကင်းစင်ပပျောက်ပြီး ကောင်းခြင်းများစွာရရှိကြပါစေလို့ ကောင်းသောဆုတောင်းမှုပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ “လို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် အောင်ထက် လိုပဲ သင်္ကြန်မှာ မလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ အရာလေးတွေရှိရင် ကောမန့်မှာ ရေးသားသွားပေးခဲ့အုန်းနော်။ အဆုံးထိ ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
သၾကၤန္မွာ မဆိုျဖစ္လိုက္ရတဲ့ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကို ဝမ္း နည္းစြာ ေျပာျပလာတဲ့ ေအာင္ထက္
ပရိသတ္ႀကီးေရ အိမ္မက္ဆုံရာသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွတစ္ ဆင့္နာမည္ႀကီး လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ ဟာ လက္ရွိမွာလဲ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနဆဲပါပဲေနာ္။ ေအာင္ထက္ သီဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းေတြဟာလည္း ေယာက္်ားေလးပရိသတ္ေတြၾကားမွာ အ ေတာ္ေလးေရပန္းစားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခ အေနေတြေၾကာင့္ သီခ်င္းသီဆိုမူ႕ေတြ ရပ္နားထားတဲ့ ေအာင္ထက္ ဟာ အခုခ်ိန္မွာလဲ ဂီတအႏုပညာအလုပ္ေတြကို အနည္းအက်ဥ္းပဲ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႕မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ဟာပရိသတ္ေတြကိုရင္ဖြင့္လိုက္ပါတယ္။
ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္အခါမွာ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ ဟာ သူတန္ဖိုးထားရတဲ့ မန္းေတာင္ရိပ္ခိုဆိုတဲ့ သၾကၤန္သီခ်င္းႀကီးကို မဆိုျဖစ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကို ပရိသတ္ေတြကို ေျပာျပလိုက္တာပါ။ ဒါအျပင္ ပရိသတ္ေတြကိုလဲ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါေသးတယ္။
ဒီအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ထက္ ရဲ႕လူမူ႕စာ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ” ေၾသာ္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးၿပီးသြားၿပီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလြန္တန္ဖိုးထားေသာ မန္းေတာင္ရိပ္ခို သီခ်င္းကိုေတာင္ မဆိုျဖစ္လိုက္ဘူး
မိတ္ေဆြတို႔ေရာ??? အားလုံးေသာမိသားစုမ်ားမိတ္ေဆြမ်ားႏွစ္သစ္မွာေဘးကပ္ဆိုးမွန္သမွ်ကင္းစင္ပေပ်ာက္ၿပီး ေကာင္းျခင္းမ်ားစြာရရွိၾကပါေစလို႔ ေကာင္းေသာဆုေတာင္းမႈျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ “လို႔ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ ေအာင္ထက္ လိုပဲ သၾကၤန္မွာ မလုပ္ျဖစ္လိုက္တဲ့ အရာေလးေတြရွိရင္ ေကာမန႔္မွာ ေရးသားသြားေပးခဲ့အုန္းေနာ္။ အဆုံးထိ ဖတ္ရႈ႕ေပးတဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
Previous Article ဆံပင်ပုံစံလေးပြောင်းပြီး အရမ်းကို လန်းနေတဲ့ သ ရုပ် ဆောင် ဒေါင်း
Next Article အကိုနှစ်ယောက်တော့စွံပြီ သူမပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်